Fitaovana hanatsarana ny fandrakofana WiFi ao an-trano | Bezzia
Fitaovana hanatsarana ny fandrakofana WiFi ao an-trano
Tena ilaina ny tambajotra Wifi ankehitriny any amin’ny trano maro. Navelany izahay mifandray amin'ny aterineto rehefa ao an-trano isika nefa tsy mampiasa ny angon'ny mpandraharaha finday na ny fifandraisana an-tariby. Na izany aza, amin'ny trano sasany dia mety ilaina ny mampiditra fitaovana hanatsarana ny fandrakofana WiFi.
Any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny router ny Fampisehoana famantarana WiFTsy dia tsara foana aho ary mety mahaliana ny mividy fitaovana fanampiny hanatsarana azy. Tsy ny fametrahana ny router faharoa no resahina fa ny hiloka amin'ny fanitarana famantarana na fanamafisam-peo. Betsaka ny zavatra hita eny an-tsena ankehitriny, ka ny tena malaza dia ireo telo resahina amin’izao fotoana izao.
1 Fampandrenesana famantarana
3 Ny rafitra tambajotra WiFi Mesh
Ny fomba tsotra sy mora indrindra mba hanatsarana ny fandrakofana ny tambazotrantsika ao an-trano dia ny fametrahana fanitarana na fanamafisam-peo amin'ny famantarana WiFi. Ampy ny mampifandray ireo fitaovana kely ireo mivantana amin'ny fivoahana ao an-trano mba hanamafisana ny famantarana ny tambajotra WiFi efa misy.
Ireo fitaovana ireo dia miasa toy ny famerimberenana famantarana. Hitan'izy ireo ny famantarana avy amin'ny router sy manamafy izany izy ireo mba handeha lavitra kokoa, ka manitatra ny radius fandrakofana. Miasa toy ny tetezana izy io, maka ny famantarana Wi-Fi avy amin'ny router ary mamerina izany any amin'ny faritra izay malemy na tsy misy mivantana ny famantarana.
Ny fandrakofana ny tambajotra WiFi dia azo itarina amin'ny alàlan'ny fanitarana famantarana tsy misy tariby iray na maromaro, mba handrakotra ny faritra lavitra ny router. Izy io dia rafitra tsotra izay ny fahombiazany, na izany aza, dia mety miovaova arakaraka ny fametrahana herinaratra sy ny fitsabahana. Ary ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia ny iray izay afaka mitantana ny interface tsara ny router, arakaraka ny kalitaon'ny fitaovana, mety ho very hatramin'ny 50 isan-jaton'ny bandwidth tany am-boalohany.
Ny adaptatera PLC miaraka amin'ny WiFi dia rafitra tsotra ihany koa apetraka. Mampiasa ny tambazotran-jiro izy ireo avy any an-trano mba hitondra ny fifandraisana amin'ny toerana hafa lavitra ny router, misoroka fa tsy maintsy mametraka tariby Ethernet lava, ary koa ny fahaverezan'ny hafainganam-pandeha sy ny kalitao.
Izy ireo dia ahitana adaptatera PLC voalohany izay mifandray amin'ny router'ny mpandraharaha amin'ny alàlan'ny Ethernet sy ny nodes samihafa na adaptatera zanabolana miparitaka manodidina ny efitrano. Ny adaptatera lehibe dia mandefa ny famantarana angon-drakitra amin'ny alàlan'ny tariby elektrika ao an-trano mankany amin'ireo efitrano samihafa ao an-trano. Indray mandeha, ny adaptatera PLC zanabolana miaraka amin'ny fahafaha-Wi-Fi, mifandray amin'ny fivoahana herinaratra, dia manangona ny famantarana ny angon-drakitra ary mametraka teboka fidirana an-tariby izay hifandraisan'ny fitaovanay toy ny finday, solosaina ... Ankoatra izany, manolotra seranana Ethernet mitambatra koa izy ireo. ho an'ny mampifandray fitaovana amin'ny cable.
Manana tombony manokana izy ireo raha oharina amin'ny extenders: zara raha very haingana izy ireo ary marin-toerana kokoa izy ireo; nefa lafo kokoa noho ireny.
Ny rafitra tambajotra WiFi Mesh
Izy ireo dia ny fivoaran'ny WiFi extenders. Fitaovana sarotra kokoa miaraka amin'ny nodes maro afaka mifandray amin'ny tsirairay izay mitantana ho azy ny tambajotra Wi-Fi ary mampifandray anao amin'ny tambajotra mety indrindra na haingana kokoa amin'ny fotoana rehetra.
Ny rafitra dia ahitana a node lehibe mifandray amin'ny cable Ethernet mankany amin'ny router ary mifandray an-tariby amin'ny sisa amin'ny zanabolana nodes, mamorona tambajotra WiFi fanamiana eo amin'izy rehetra miaraka amin'ny mari-pamantarana sy tenimiafina mitovy.
Ny tambajotra Wifi mesh dia manao kajy hoe node / zanabolana no tsara indrindra hifandraisana amin'ny fotoana rehetra mifototra amin'ny satan'ny nodes hafa, fitaovana mifandray, tanjaky ny famantarana ary antony maro hafa, amin'ny fomba mangarahara tanteraka amin'ny mpampiasa. Lasa rafitra be izany marin-toerana kokoa sy haingana kokoa noho ny extenders na PLCs, fa lafo kokoa.
Fantatrao ve ireo rafitra ireo ho an'ny manatsara ny fandrakofana WiFi ny tranonao? Tena ilaina izy ireo amin'ny trano lava sy tery, ary koa amin'ireo manana rihana mihoatra ny iray. Jereo ny tsirairay amin'izy ireo, ampitahao ny safidy samihafa ary fidio izay mety indrindra amin'ny tranonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fitaovana hanatsarana ny fandrakofana WiFi ao an-trano
Ny andiany izay nandraisan'ny Amazon Prime ny taona vaovao